2 Responses to “Wadada kaliya ee Qaranka Soomaaliyeed u Furan Ma FEDERALBAA? Yeyse Dani ugu Jirtaa!!!!!!”
Marian Maslah Ahmed Says:
Sida ii muuqata aniga wax badan ayaan arkaa, Federalism dadkeena uma bisla, mana ila aha in maantay waqtigaan aan joogno aan meel ku gaari karno, dadkeena inta aan aqoon ku filan lahayn, oo aan waxba laga dhaadhicin karin ayaa badan, qofkii aad wax u run u sheeg isitiraahdo; wuxuu u heystaa in aad wax ka dheceysid.
Waa runtaa Marian. Wxaadse moodaa in dadku hadda ka soo xiisa dhacayaan Federaalka inta macaanka ku heysata ma ahane. Ilaahow waxa ummadda u kheyr ayaan kaa baryeynaa.